खेलकुद – Page9– Nepali Public
रोनाल्डोले रियल मड्रिड छाड्दाः कमजोर हुने मेस्सीको विश्लेषण
भदौ १९, काठमाडौं । क्रिष्टियानो रोनाल्डोले रियल मड्रिड छाड्दा आफू आश्चर्यमा परेको लिओनल मेस्सीले बताएका छन् । यसले मड्रिड केहीकमजोर हुने मेस्सी विश्लेषण छ । बार्सिलोनाका अर्जेन्टिनी स्टार मेस्सी र पोर्चुगिज रोनाल्डोबीच पछिल्लो एक दशक निकै प्रतिस्पर्धा रहृयो । एकअर्काका...
एसियाडमा रजत जित्न सफल पाराग्लाइडिङ खेलाडीहरुले पाए पाँच/पाँच लाख
भदौ १८,काठमाडौं । इन्डोनेसियामा सम्पन्न १८औं एसियाली खेलकुद (एसियाड)मा नेपाललाई रजतपदक दिलाएर पदकविहीन हुनबाट जोगाएका नेपाली पाराग्लाइडिङका खेलाडीहरु नगदसहित सम्मानित भएका छन् । सोमबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा युवा तथा खेलकुदमन्त्री जगतबहादुर विश्वकर्माले पदक जित्न सफल खेलाडीलाई जनही पाँच लाख रुपियाँसहित...
रोनाल्डो होइन, २० वर्षे बोल्किया हुन् विश्वकै धनी फुटबलर
भदौ १८, काठमाडौं । क्रिष्टियानो रोनाल्डो भन्दा २७ गुणा धनी, लिओनल मेस्सीभन्दा ३३ गुणा धनी र नेइमार भन्दा ५० गुणा धनी फुटबलर ? त्यो पनि भर्खर २० वर्ष फुटबलर ? हो, उनको नाम फइक जेफ्रि बोल्किया हो । बोल्किया फुटबल...
भदौ १८, पोखरा । इण्डोनेसियामा हालै सम्पन्न १८ औँं एशियाली खेलकूदमा रजत पदक विजेता पाराग्लाइडिङ टिमलाई भोलि मङ्गलबार गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरामा भव्य स्वागत गरिने भएको छ । सो एशियन खेलकूदमा पोखराबाट पाराग्लाइडिङ खेलमा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै रजत पदक हासिल...
गोल्डकप फुटबल प्रतियोगिताको नेपाल समूह ‘ए’ मा
भदौ १७, काठमाडौं । नेपाल बङ्गबन्धु अन्तर्राष्ट्रिय गोल्डकप फुटबल प्रतियोगिताको समूह ‘ए’ मा परेको छ । बङ्गलादेश फुटबल महासङ्घले आज सार्वजनिक गरेको खेल तालिकाअनुसार नेपालसहित समूह ‘ए’ मा प्यालेस्टाइन र ताजिकिस्तान रहेको छ । समूह ‘बी’ मा आयोजक बङ्गलादेश, लाओस...
भदौ १७, काठमाडौं । एशिया कप छनोटअन्तर्गत चौथो खेलमा नेपालले जितका लागि १५२ रनको लक्ष्य पाएको छ । मलेशियाको राजधानी क्वालालम्पुरमा आज टस जितेर ब्याटिङ गर्दै सिङ्गापुरले ४२ ओभरमा सबै विकेट गुमाएर १५१ रन बनायो । सिङ्गापुरका लागि चेतन रामचन्द्र...
भदौ १५, काठमाडौं । नेपाली फुटबल टोली आइतबार बङ्गलादेश जाने भएको छ । ढाकामा हुने १०औँ साफ च्याम्पियनशिपमा भाग लिन २९ सदस्यीय नेपाली टोली त्यसतर्फ जान लागेको हो । अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ (एन्फा)का प्रवक्ता किरण राईका अनुसार प्रतियोगितामा आयोजक...
सुवासको अर्धशतकसँगै नेपालको १०० रन पूरा
भदो १४, काठमाडौं । एसिया कप छनोट क्रिकेटमा युएईले दिएको २५५ रनको चुनौती पछ्याउँदै ब्याटिङ गरेको नेपालले १०० रन पूरा गरेको छ । खराव सुरुवात गरेको नेपालले ओपनर सुवास खकुरेलको अर्धशतकसँगै १०० रन पुरा गरेको हो । खकुरेल अर्धशतक बनाए...
भदौ,१३, । काठमाडौं । एसिया कप छनोट क्रिकेटमा नेपालले ओमनको दोस्रो विकेट लिएको छ । ओमनका ओपनर ब्याट्सम्यान जतिन्दर सिंह ३० रन रनआउट भएका हुन् । अहिले ओमनले २१ ओभरको समाप्तिमा २ विकेटको क्षतिमा ७१ रन बनाएको छ । नेपालका...